Guqula uKhetho lweSikhangeli kwiBlackBerry Playbook
Njengaye nawuphi na umsebenzisi weWebhu eBanzi yeHlabathi anokungqina, ngamanye amaxesha isuntswana leWild Wild West phaya. Uphando kwiMotion luye lwahlangula ngolunye ukhuseleko kunye neempawu zabucala zebrawuza yeBlackBerry Playbook.
Ukubonisa ukhetho lwesikhangeli, swayipha ezantsi ukusuka kwisakhelo esingaphezulu. Emva koko cofa i icon yegiya. Nazi iindlela ezikhoyo:
Vula ukubrawuza kwangasese. Thepha Ubumfihlo kunye noKhuseleko kwaye emva koko usete iswitshi yangasese yokuKhangela kwiVuliwe. Xa kuvuliwe, isikhangeli sigcina kuphela imbali yakho, egciniweyo iifayile (iikopi zethutyana zamaphepha owatyeleleyo), iicookies, kunye nolunye ulwazi lobugcisa. Xa uvala isikhangeli, olu lwazi luyacinywa.
alka seltzer tablet ebandayo
Cima idatha egciniweyo. Thepha Ubumfihlo noKhuseleko emva koko ucofe Cima Konke.
Yabelana ngendawo yakho neewebhusayithi. Ukuba awunangxaki nokuvumela iiwebhusayithi ukuba zazi ukuba ubekwa phi, cofa iiMvume kwaye emva koko usete iVumela iiWebhusayithi ukuba zifikelele kwiNdawo yokuTshintsha indawo. Ngamanye amaxesha le yinto entle; umzekelo, iphepha lakho leendaba lendawo linokubonisa uqikelelo lwendawo okuyo.
Iphilisi ebomvu ebomvu 3147
Ukukhetha iphepha lasekhaya. Ayisiyiyo yonke into eyothusayo, isikhangeli sePlaybook siza kuwe nephepha lasekhaya njenge www.blackberry.com. Ukuyitshintsha, vula isikhangeli kwaye uswayipha ezantsi ukusuka kwi-bezel ephezulu ukubonisa imeko yescreen. Cofa kwi icon yegiya kwaye ukhethe Ngokubanzi. Unikwe iphepha elizele ngokwezifiso; cofa kwicandelo elivulekileyo ecaleni kweKhaya uze uthayiphe idilesi yewebhu ofuna ukuyisebenzisa.
Ngaba i-acyclovir ikhuselekile ekukhulelweni
isitokhwe esitokisini kumjikelo
Iziphumo ebezingalindelekanga zexesha elide ze-seroquel
iyeza lokugonya i-prednisone kunye ne-covid
i-nucleoside reverse transcriptase inhibitors
amagama amayeza e-acne cream